သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သုံးစွဲသူများ၏ကိုယ်စားထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကိုတွေအများကြီးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားပါသည်သည့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မယ်ဆိုရင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်လုံခြုံရေးအချက်အလက်များကိုခိုးယူသောသူနဲ့ hacker များဆန့်ကျင်အာမခံထားခံရဖို့လိုအပ်. သင်သည်သင်၏သုံးစွဲသူများ၏ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်နှင့်အင်တာနက်ဟက်ကာတွေမခံတဲ့ data တွေကိုခိုးယူဖို့သင့်ရဲ့ site ကို hack သို့ဆိုပါက၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးအလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင် - နှင့်ဤကြီးစွာသောအန္တရာယ်များမှာသင်နှင့်သင့်လုပ်ငန်းကိုထားနိုင်. သို့သော်အရပ်ဌာန၌ဆိုက်ဘာပေးရန်တာဝန်အာမခံမူဝါဒအဖုံးနှင့်အတူ, သင်ပိုကောင်းသင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေအလျှော့ပေးလိုက်လျောစေခြင်းငှါအင်တာနက်အန္တရာယ်များကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ထားပါသည်.
အခြားသူများအကြား Yahoo နဲ့ LinkedIn တို့မကြာသေးမီကသို့တိုက်ခိုက်ခံရခဲ့ကြကြောင်းသင်သတိပြုမိ Are, Yahoo ကအီးမေးလ်သန်းပေါင်းများစွာနဲ့လုပ်ငန်းသုံး user များ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအန္တရာယ်မကျရောက်စေ? ကြိုးစားခြင်းစမီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း sites များမှခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များခိုးယူခံစေခဲ့, နှင့်သင်အရပ်ဌာန၌ဘေးကင်းလုံခြုံပိုက်ကွန်ကိုချပြီးမပါဘဲဒီလိုအန္တရာယ်များမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထားချင်ကြဘူး. အစဉ်အဆက်ကဟက်ကာတွေထဲကသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့သင့်ရဲ့ hosting ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ဖြစ်သည်ကိုမစဉ်းစားပါနဲ့, သူတို့ကအမှန်တကယ်သမျှကိုအားကိုးမဖြစ်စေခြင်းကြောင့်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ web hosting ကုမ္ပဏီ၏လက်သို့သင့်ရဲ့ website မှာ၏လုံခြုံရေးကိုမထားသင့်ပါ, သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ platform ပေါ်တွင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေက data တွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကြိုးစားသော်လည်း.
ဆိုက်ဘာပေးရန်တာဝန်အာမခံအတွက်အထူးပြုအထူးသဖြင့်အာမခံကု​​မ္ပဏီတွေရှိပါတယ်, နှင့်သင်စသင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လွှမ်းခြုံကိုဝယ်ခြင်းငှါအွန်လိုင်းစျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်. ဤဆိုက်ဘာပေးရန်တာဝန်အာမခံကု​​မ္ပဏီသင်ရင်ဆိုင်ရမည့်အလားအလာအင်တာနက်တိုက်ခိုက်မှုအဆင့်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဒေတာများနှင့်လုံခြုံရေးအချက်အလက်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ firewall ကိုအကာအကွယ်ပေးမှု proffer လို, ပြီးတော့သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အာမခံမူဝါဒလွှမ်းခြုံရေးဆွဲ. သင့်အာမခံလုံလောက်စွာသင်လျော်ကြေးနှင့်စျေးကြီးတရားစွဲမှု မှစ. သင်တို့အားကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု, စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှု, နှင့်ပျက်စီးသွားသောအွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်း.
သင်ဟက်ကာများ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးအလားအလာများနှင့်သူတို့သင့်ရဲ့အင်တာနက်စီးပွားရေးမှရှိုးနှင့်အန္တရာယ်များကိုဖောက်သည်များထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ, သင်တို့သည်ယနေ့ဆိုက်ဘာပေးရန်တာဝန်အာမခံရဖို့အားဖြင့်ဖောက်သည်တွေရဲ့ data နှင့်ပုဂ္ဂလိကအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကာအကွယ်ပေးလို. ကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ပွားနေသောအင်တာနက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ကိုပစ်မှတ်ထားထားနိုင်လျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်များမှာ; နှင့်သင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘာမှတန်ဖိုးရှိပါလျှင်, ထို့နောက်ကြောင့် online ကိုဟက်ကာတွေအတွက်အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်. ဆိုက်ဘာပေးရန်တာဝန်အာမခံသင်လိုအပ်ကျော-up ကလုံခြုံရေးအစီအစဉ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဒါကြောင့်တရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူဒွန်တွဲအွန်လိုင်းအောင်မြင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆုံးရှုံးအကြားအားလုံးခြားနားချက်စေခြင်းငှါ. ယနေ့တယောက်ကို Go, သင် ပြု. ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိချင်ပါတယ်.